AppSheet: Dhis oo Adeegso Nuqul App-ka Ansixinta Moobilka leh Waraaqaha Google | Martech Zone
In kasta oo aan weli horumariyo waqti ka waqti, haddana waxaa iga maqan hibo ama waqti aan ku noqdo horumariye waqti-buuxa ah. Waan ku qanacsanahay aqoonta aan haysto - waxay iga caawineysaa inaan soo afjaro farqiga u dhexeeya ilaha horumarinta iyo ganacsiyada dhibaatada haysta maalin kasta. Laakiin… Ma doonayo inaan sii wado barashada.
Waxaa jira dhowr sababood oo ah hormarinta qibradeyda barnaamijkeygu aysan aheyn istiraatiijiyad weyn:
Waqtigan xaadirka ah ee shaqadayda - khibradeyda waxaa looga baahan yahay meelo kale.
Sababta ugu weyn, in kastoo, ay tahay maxaa yeelay ma aaminsani in baahida loo qabo dalab aan la dabooli karin ee soo-saareyaasha ay sii socon doonto.
Sababta Sababtoo ah aaladaha waaweyn ayaa si xarago leh u xallinaya xalalka aan-code lahayn.
Ma jiro Xeer, Xal aan lahayn, iyo Xallinta Xeerka Hooseeya
Wejiga xiga ee tiknoolajiyada dhijitaalka ah ayaa laga yaabaa inuu ka xiiso badan yahay horumar kasta oo aan in muddo ah aragnay. Shirkadaha waaweyni waxay kobcinayaan xallinta iyo hoos u dhaca (ma jiro lambar ama lambar la'aan) xalalka si waalli ah u wanaagsan. Fursadda nidaamyadan waa mid aan xad lahayn maadaama hoggaamiyeyaasha ganacsigu aysan dhab ahaan u baahnayn shirkad horumarineed si ay xalkooda uga keenaan sawir gacmeed maro ilaa codsi buuxa.
Haddii aad isticmaasho Goobta Shaqada Google hay'addiina (aad baan ugu talin lahaa), waxay bilaabeen AppSheet - oo ah dhisme codsi-nambar la'aan ah! Iyadoo Xaashida, waxaad si dhakhso leh u abuuri kartaa barnaamijyo khaas ah oo kaa caawinaya toosinta, otomatiga, iyo fududeynta shaqada. Koodh looma baahna.
Qof kasta oo ku jira Google Workspace wuxuu abuuri karaa oo maamuli karaa barnaamijyadooda u gaarka ah taasoo kordhin karta wax soo saarka kooxdaada, yareyn karta qaladaadka, isla markaana yareyn karta dib u dhaca kooxdaada horumarka.
Codsiga Ansixinta Mawduuca AppSheet
Waa kuwan tusaale fiican, a codsiga oggolaanshaha maamulka kaas oo isku daraya waraaqaha Google iyo AppSheet si ay si fudud ugu riixaan waxyaabaha ku jira nidaamka oggolaanshaha tallaabo-tallaabo.
Barnaamijkan gaarka ahi wuxuu kuxiranyahay xaashiyaha Google, laakiin waad dhexgalin kartaa ilaha xogta aad rabto.
Ku hawlgal iTunes ama Google Play
Qaybta ugu fiican? Abka aad waqtiga ku lumisay abuurista khad koodh ah ma aha oo keliya a codsiga web kaas oo ku shaqeynaya biraawsar, AppSheet wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay abuuraan nooc ka mid ah whitelabel nooca barnaamijka oo aad geyn karto Google Play ama iPhone adigoo adeegsanaya iTunes.
Hawlgalintu waxay u baahan tahay ruqsad siinta ugu yar ee AppSheet ee ku saleysan lacag-bixiyaha-ama ka-qaybgalka PRO.
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa tayda Google halkan ku lifaaqan
Tags: tufaax iosxaashidalambar lahaynbarnaamijka oggolaanshaha waxyaabahabarnaamijka googlexaashiyaha googleganacsiga googlegoogle playgoogle goobta shaqadaguskamacruufkamacruufka appiTunesapp mobilenambar-lahaynNo-code dhise app
JungleScout: Qalabyo iyo Tababaro Lagu Bilaabayo Oo Lagu Kordhinayo Iibkaaga Amazon